The Ab Presents Nepal » प्रकाश सपूत माथि जातीय गाली गर्नेलाई संसदमा कारबाहीको माग!
प्रकाश सपूत माथि जातीय गाली गर्नेलाई संसदमा कारबाहीको माग!
काठमाडौँ-: प्रकाश सपुतको चर्चित गीत ‘गलबन्दी’बारेको विवाद संसदमा प्रवेश गरेको छ। सत्तारुढ नेकपा निकट गायक शम्भु राईले प्रकाश सपुतलाई भाका चोरीको आरोप लगाएका थिए। यसप्रति प्रतिपक्षी सांसदले आपत्ति जनाएका छन्।
‘गायक सपुतलाई शम्भु राई र उनका मतियारले जातीय रूपमा नीच गाली गरेको पाइएको छ। सिङ्गो दलित समुदायलाई अपमान हुनेगरी नीच गाली गर्नेलाई जातीय भेदभावअनुसार कारवाही गर्नुपर्छ। अन्यथा सिङ्गो दलित समुदाय आन्दोलनमा होमिने छ।